Sales Representative Archives - Glory Assumption Space
၁) Sales Representative – Male / Female – (7) Posts - လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တာမွေမြို့နယ် ။
၁) Sales Representative – Male / Female – (7) Posts - လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - တာမွေမြို့နယ် ။ ( စားသောက်ကုန် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီကြီး မှ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ) • စားသောက်ကုန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ ) နှစ် အနည်းဆုံး ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရ ( သို့ ) ဆယ်တန်းအောင်၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည် ။ • အသက် ( ၁၈ ) နှစ် မှ ( ၂၅ ) နှစ်အတွင်း ရှိရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈:၃၀ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၅:၃၀ ) နာရီအထိ ။ • တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး ၀င်ရမည် ။ • ပထမပတ်နှင့်တတိယပတ်တွင် စနေပိတ်သည် ။ • အပတ်တိုင်း တနင်္ဂနွေပိတ်ပါသည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ ဖယ်ရီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လာရောက်စီးနိုင်ပါသည် ။ • နိုင်ငံခြားဖက်စက် စားသောက်ကုန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတျခကျြ ။ ။ လေြာကျထားလိုသညျ့ရာထူးမြားကို တဈပါတညျးဖျေါပွပေးကွပါရနျ နှငျ့ CV Form မြားတှငျ Passport ဓာတျပုံ တဈပါတညျး ထညျ့သှငျးပေးပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ။ Email ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ လူကိုယျတိုငျလညျးကောငျး လာရောကျ လြှောကျထားနိုငျပါသညျ။ Viber ဖွငျ့ CV ပို့မညျဆိုပါက ဓာတျပုံသခြော ကွညျလငျပွတျသား စှာရိုကျ၍ ပေးပို့ပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခနျးလိပျစာ – ခွံအမှတျ ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေြာငျးလမျး ၊ ၉ မိုငျ ၊မရမျးကုနျးမွို့နယျ ။ ( ပွညျလမျး ၊ ၉ မိုငျ မှတျတိုငျတှငျ ဆငျးရနျ ။ Ocean North Point နှငျ့နီးပါသညျ ။ )
၁) Se၁)Sales Representative – Male - (5) Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်(အထက်) /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Senior Sales Representative – Male - (5) Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်(အထက်) /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - FMCG Experience ရှိရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - English စကားအနည်းငယ်ရရမည်။ - Computer Word,Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Representative – Male (10) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။
Sales Representative – Male (10) Posts / လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။
ဘွဲ့ရ (သို့) ဆယ်တန်းအောင်၍ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။
FMCG အရောင်းပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ် ရှိရမည်။
အသက် (၂၀)နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
အလုပ်ချိန် ( 8:30 – 4:45 )
စနေတစ်ပတ်ခြားပိတ်သည်။ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Representative – Female/Male (10) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ Sales Representative – Female/Male (10) Posts / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်မြို့နယ် •	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ •	အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ •	သွက်လတ်ဖျတ်လတ်ရမည်။ •	စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Downtown Sales Representative - Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 2. Downtown Sales Representative - Female (5) Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက်/လမ်းမတော်မြို့နယ်။ - ၁၀တန်း (သို့မဟုတ်) ၁၀ တန်းအောင် ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ြ့ပီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အသက် ၁၈ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales Representative – Male (5) Posts / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်မြို့နယ်
Salary Rang : Above 150000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ Sales Representative – Male (5) Posts / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်မြို့နယ် • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • အရောင်းပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ • FMCG ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ • သွက်လတ်ဖျတ်လတ်ရမည်။ • စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင်(အင်းစိန်လမ်းမကြီး) ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative – Male –(5) posts /Salary -200000 Kyats
မင်္ဂလာပါ ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales Representative – Male –(5) posts /Salary -200000 Kyats / Thingangyun Township -	ဘွဲ့ရ -	Marine ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူ Engine ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ -	အသက်အရွယ်ကန့်သတ်မထားပါ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative –Male (10) posts
Salary Rang : 100000 - 150000
Sales Representative –Male (10) posts/ Salary-150,000 Kyat / Kamayut Township - ဘွဲ့ရ - အသက် (20) နှစ်မှ 30 နှစ်အောက် - FMCG အရောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး၊ ဆကက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင်း နယ်မြေဗဟုသုတရှိရမည်။ နယ်ခရိးသွားလုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Sales Representative - Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1.	Sales Representative - Female (5) Posts / Salary 120000 Kyats / Mayangone Township Requirements -	၁၀တန်းအောင်ရမည်။ -	အတွေ့အကြုံရှိသူ ပိုဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_1346" align="alignnone" width="400"] ProEXR File Description
Sales Representative (Retail Channel) - Male (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 6. Sales Representative (Retail Channel) – Male (5) Posts / Salary 200,000 Kyats / Kyeemyindaing Township Requirements - Graduate with any Degree. - Minimum 1 years experiences in FMCG field. - Good communication and interpersonal skill. - Independent ,self-motivated and able to work under pressure. - English language is preferable. Responsibilities - Daily sales activities according to the way plan. - Cash collection. မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
မင်္ဂလာပါရှင့်။လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင်ရှိသောဓါတ်ခွဲခန်းကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1.	Sales Representative – Female (5)Posts /Salary -120000 Kyats ++++ /Lanmadaw Township -	ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) အဝေးသင်တက်ရောက်နေဖြစ်ရမည်။ -	အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ -	Lab Instrument အရောင်းပိုင်းရှိသူဦးစားပေးမည်။ -	Computer ကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ -	Basic English Skill Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative - Male/ Female ( 20 posts )
Can apply fresh graduated